Google Play dia nanala ireo fampiharana 85 izay naneho doka fanararaotana | Androidsis
Google Play dia manala ireo fampiharana 85 izay naneho doka tamin'ny finday
Matetika i Google Play dia manana olana amin'ny rindranasa marobe, toy ireo mpitsikilo mpampiasa. Ankoatr'izay, amin'ny fanadihadiana isan-karazany Nahita fampiharana maloto. Nesorin'ilay magazay ny fampiharana 85 totaliny, izay natokana hanehoana doka amin'ny efijery hidin-tariby an'ny mpampiasa. Nasehon'izy ireo koa ny dokam-barotra teo amin'ny efijery finday vantany vao nivoha.
Tsy vao sambany isika mahita tranga toy itony, roa volana lasa izay dokam-barotra fantatra nisy fiantraikany tamin'ny rindranasa marobe tao amin'ny Google Play. Ny valiny amin'ity tranga ity dia mitovy, miroso amin'ny fanafoanana ireo fampiharana rehetra ireo ny fivarotana. Tsy misy intsony izy ireo.
Ireo mpikaroka momba ny filaminana Trend Micro dia nahita an'ireto fampiharana ireto. Izy rehetra dia nahitana ny malware Nantsoin'izy ireo ny anarana hoe AndroidOS_Hidenad.HRXH. Izy io dia rafitra manafika natokana hanehoana doka marobe amin'ny findain'ny mpampiasa. Niseho ireo doka rehefa nanokatra ny telefaoniny ny mpampiasa ary nameno ny efijery iray manontolo. Ary koa, nokasaina handeha isaky ny dimy minitra izy ireo.
Ka tsy afaka hisoroka ireo doka ireo ny mpampiasa. Ireo fampiharana 85 dia hita ao amin'ny Google Play. Maro amin'izy ireo no mifandray amin'ny sary, toy ny Magic Camera na Blur Photo, na dia nisy aza ny lalao sasany. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny lisitra feno, misy ato amin'ity antontan-taratasy ity.
Na eo aza ireo fanambarana ireo, tsy nisy na iray aza tamin'ireo fampiharana nanome olana amin'ny asa. Nanaraka ny fenitry ny Google Play izy rehetra ary niasa ara-dalàna, mba hahafahan'izy ireo hampiasaina amin'ny antony nampidinana azy ireo. Na dia niandry 30 minitra aza izy ireo aorian'ny fametrahana azy ireo mandra-pisehon'ilay doka voalohany.
Tsy fantatra ny isan'ny mpampiasa voakasik'ity tranga ity, na dia ny vaovao tsara dia tsy zavatra matotra be izany. Fa raha manana an'ireto fampiharana ireto izay mampiseho doka be loatra ianao dia tsara kokoa ny manala azy amin'ny telefaoninao. Mampalahelo fa azo antoka fa ny tranga sasany amin'ity karazana ity dia hiverimberina ao amin'ny Google Play afaka kelikely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google Play dia manala ireo fampiharana 85 izay naneho doka tamin'ny finday
Google Play dia hampiditra fanaraha-maso bebe kokoa ho an'ireo fampiharana izay nakarina tao amin'ny magazay